Need to investigate, arrest this criminal Min Aung Hlaing who is protecting the extremist terrorist Wirathu | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeNeed to investigate, arrest this criminal Min Aung Hlaing who is protecting the extremist terrorist Wirathu
ကိုယ်တော် ပျောက်နေတာ (၃) ရက်ရှိပြီ
“မန္တလေးကိုယ်တော်ကို အရေးယူဖို့ ရှိပါသလား ?”တဲ့
‘ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အကာကွယ်ပေးထားတာပါ” တဲ့
ကိုယ်တော် စိတ်ချမ်းသာအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဟို သုစိတ္တကိုလည်း လမ်းမသလားစေနဲ့ သူများတွေ မြင်ရင်မကောင်းဘူး…
← Global Witness ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ ” မြန်မာအပါဝင် တထပ်တည်း ဆင်တူလှသော ကမ္ဘာ့သူခိုးများနိုင်ငံတွေ…”
It isacheapest option. No need to send troops, no need to bomb, no need to invoke R2P, no need to send drones to take them out, refugee problems will reduce, no need to introduce the economic sanctions …. →
3 thoughts on “Need to investigate, arrest this criminal Min Aung Hlaing who is protecting the extremist terrorist Wirathu”
Su Nge ကာချုပ်ကြီးရယ် ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမှန်ကိုသိနေလို့လည်း နောင်၅နှစ်မှာ လွှတ်တော်ထဲကထွက်ပေးမယ်ပြောခဲ့ပီး .အခုလိုမတရားမှု့တွေ . မမှန်ကန်မှု့တွေကို သိသိကြီးနဲ့ ကာစီးမထားပါနဲ့တော့ . အစိုးရအရာထမ်းတယောက်အနေနဲ့ နောက်ဆုံအချိန်တွေမှာ နံမယ်ကောင်းလေးနဲ့ ပြည်သူ့မေတ္တာခံယူပီး ပင်စင်ယူသွားပါလားဟင်.
Like · Reply · 229 · Yesterday at 1:24pm
Khaing Khant လား ပင်စင်ပေးရမယ့် လူဖြစ်နေလို့ပါ
စိတ်တာ့ မရှိပါနှင့် ခင်ဗျာ။
နင့်ကို ငါ ချစ်တယ် မယုံပေါင် နေက်ငါးနှစ်ဆို သူပင်စင်သွားပြီး
Zanaka Zanaka သူ့ကို ပင်​စင်​​ပေးရင်​ ကြိုးကွင်းပါထည့်​​ပေးမှရမှာ
Like · Reply ·3· Yesterday at 3:13pm
Tun Tin ပေပေဂျီးလေ..
(ကြောက်တယ် သတ§ မရှိလို့)
Htoo Zaw ဟုတ်ပဗျာ…စားထားတာတွေကလည်း..မျိုးဆက်2ဆက်လောက်..ထိုင်စားလို့ရနေပါပြီ..နာမည်ကောင်းလေးနဲ့..ပြည့်သူဆန်ဒကိုလိုက်လျောလိုက်ပါလား..ဗျာ
Tuntun Latt ငါပဲကျန်မယ်ပြောတဲ MA အပုတ်ကောင်ပဲကျန်မယ်လိုပြောပါ
Tun Thout နှစ်ပေါင်းတစ်ရာနေရမှ
Demo Heart နောက်မှ ဆူပူမှာမို့ထိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့စကား မထွက်မိပါစေနဲ့ တပ်ပိုင်ထဲမှာတော့ ထားတာ အပြင်ဆို အုတ်နီခဲစာတွေ့မယ်
Like · Reply · 61 · Yesterday at 1:39pm
Aye Kyi ကာချုပ်လဲ ဘာသာရေး အရေးအခင်းဖြစ်အောင် အားပေးအားမြှောက်လုပ်မှူ့နဲ့အရေးယူလို့ရတယ်
Aye Kyi ကာချုပ်လဲ ဘာသာရေး အရေးအခင်းဖြစ်အောင် အားပေးအားမြှောက်လုပ်မှူ့နဲ့အရေးယူလို့ရတယ်အဖြူရောင် နှလုံးသား နှင့် လူ တရားခံ လက် ခံထာမှု့နယ့် လေ
Tint Zaw ကာချုပ်အနေနှင့် ဂတုံးအနည်းစုစောက်ခွက်နဲ့ ပြည်သူအများမျက်နှာဘယ်ဟာ ကြည့်သင့်လဲ ပြည်သူအများကိုကြည့်ရင် ရေရှည်အကျိုးရှိမယ် ဦးနှောက်ရှိရင်တော့စဉ်းစား
Like · Reply · 34 · Yesterday at 1:21pm
Thet Htoo Zaw ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေ
Like · Reply · 16 · Yesterday at 2:21pm
HlaHtay HlaHtay ဦးကိုနီ တုံးကလဲသိက္ခာ​မြောင်းပုတ်​ထဲ​ရောက်​ပြီးပြီ…အခုဘုမ်းဂျီးကိစ္စလဲသိက္ခာထပ်​ကြပြန်​ပြီ
Min Moeset လုပ်ကြံခြင်းကျည်ဆံဟာ
Oo Zaw ကာချုပ် ဦးနှောက်မရှိဘူး
Tun Touck သာယာဉ်လဲမတတ်နိင်တော့ဘူး